Badhanka saxda ah - Geofumadas
Abriil, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Xaaladda AutoCAD, waxay ahayd mid aad u caadi ah in la isticmaalo badhanka midigta midigta si uu u fuliyo amar isku mid ah. Xaaladda Microstation, waxaa loo isticmaalaa wax badan dib u bilow amar, u dhiganta furaha bax ee AutoCAD.
Laakiin ka AutoCAD 2000, sanduuqa wada hadal qoraal ah oo noo ogolaadaa in fursado kale, waa su'aal mudan in waxa fiican.
In sidaa la yeelo, labada barnaamijyada dhaqan wada hadal ikhtiyaarka shaqeysiin karaa si xasaasi ah, taas oo mar kasta loo isticmaalo shaqo gaar ah, laakiin sidoo kale lagu gawraco kartaa sanduuqa macnaha guud.
Marka aan marka hore loo isticmaalay barnaamijka, markii ugu horeysay ee aad xaq click na weydiineysaa haddii aanu rajaynaynaa in aad isticmaasho button keddibna ah si aad u bilowdo amarka ama wada hadal sanduuqa (Tani waa XM ama versions V8i). Custom ka dhigaysa noo isticmaalaan xulashada ugu horeysay, laakiin waxaan marnaba ogaadaan sida ay u soo celin.
Tan waxaa lagu xalliyaa habkan:
Alaabta shaqada> doorbidida> Imaansho.
Waxaa jira fursado dhowr ah, waxaad iyaga ka mid ah ka arki kartaa in amarka keddibna ka shaqeysiin karaa furaha ESC inuu seego this for AutoCAD la feedhii saddexaad.
Hadda, haddii aan rabno badhanka saxda ah si aan udhaqaaqno wadahadalka had iyo jeer, ka dibna waxaan dooran
Dib u soo-celi Furaha Furaha, iyada oo la bedelayo Guji
Haddii aan rabno in tan la sii wado si aan dib ugu dhigo amarada, markaa waxaan dooran karnaa bedelka Riix oo hayso. Markaasay inta aannu mashquulin la doorto in uu noqdo mid firfircoon, waxa ay maamushaa ul, iyo halkii la rabtay in mid ka mid ma qiyaasi kartaa, waxaa la sameeyey saamiga 60 qaybo ka mid ah labaad. Sidaas darteed haddii aad ilaa 15 waxa ay noqon doontaa afraad ee labaad ah.
Voila, haddii aan guji sax ah, aniga resets Amarka, haddii aan xaq u riix laakiin riixaya oo i haysta sanduuqa wada hadal u muuqda mid la amarrada ugu badan ama macno amarka in la isticmaalo.
Iyadoo la adeegsanayo 3D muwaadiniinta ayaa adkeynaya helitaanka Qalabka> ikhtiyaarrada, sidaas darteed amarka waxaa loo qori karaa midda hore: fursadaha ka dibna waan sameynaa geli
Iwaa la dhisi karaa, wax aan ka badnayn halkan wakhtigu wuxuu ku jiraa milliseconds.
Post Previous«Previous Xaqiiji xogta ku saleysan sahan sax ah
Post Next Contours ka polylines (Step 1)Next »